Location: Mbido » Ịdee » Ọbịa ọbịa » Ndụmọdụ bara uru maka otu esi ede akwụkwọ mkpali
Ọ bụrụ na ị na-achọsi ike inweta ohere agụmakwụkwọ wee nweta ohere isonye na mahadum ma ọ bụ mmemme nke nrọ gị, ị kwesịrị ịma ka esi dee akwụkwọ ozi mkpali.
Otu esi ede akwụkwọ mkpali iji nweta mmụta mmụta
Na ụwa ọgbara ọhụrụ, akwụkwọ ozi mkpali bụ igodo nwere ike imeghere gị ọtụtụ ụzọ. Mpempe akwụkwọ edere nke ọma na ihe okike nwere ike ime ka onye were gị n'ọrụ kwenye, onye njikwa HR, ma ọ bụ onye ndu ọrụ na ị bụ onye kwesịrị ekwesị maka ọkwa ahụ. Ọ bụrụ na ị kpebie itinye akwụkwọ maka mmemme mmụta, ị ga-etinye akwụkwọ ozi dị otú ahụ n'ụdị akwụkwọ ọkọlọtọ. N'ụzọ dị otú a, ka akwadoro ngwa gị, ị kwesịrị ịma ka esi ede akwụkwọ mkpali ma mụta ndụmọdụ sitere n'aka ndị ọkachamara kachasị mma na-anọchite anya a. ọrụ a pụrụ ịdabere na ya.
Gịnị bụ akwụkwọ mkpali?
N'ọtụtụ okwu ndị bụ isi, akwụkwọ ozi mkpali bụ akwụkwọ ozi mkpuchi ka etinyere na ngwugwu agụmakwụkwọ ma ọ bụ ngwa ọrụ. Ọ na-achụso ebumnuche abụọ bụ isi:
Iji mee ka onye na-agụ ya kwenye ihe kpatara na ị bụ onye kachasị mma;
Iji kọwaa ebumnuche gị ịbanye mahadum ma ọ bụ sonyere ụlọ ọrụ.
Mpempe mpempe akwụkwọ a dị nkenke mkpa. Ọtụtụ mgbe, bọọdụ nnabata na-ebelata ndepụta nke ndị na-achọ akwụkwọ site n'ịhọrọ ngwa nwere naanị mkpụrụedemede mkpali. Gịnị banyere ha ndị ọzọ? Ọ dịghị ihe! Ụlọ ọrụ ahụ ga-enyefe ndị ọzọ ohere. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịme ya na ndepụta mpụtara, mepụta nkwupụta nkeonwe dị ịtụnanya ma na-adọrọ adọrọ ma nyefee ya na akwụkwọ anamachọihe.
Ọ bụrụ na itinye akwụkwọ maka agụmakwụkwọ ọkwa gụsịrị akwụkwọ, akwụkwọ ozi mkpali dị mkpa. Mmemme ọpụrụiche yiri nke a maka ndị Bachelor chọrọ ka nwa akwụkwọ tinye akwụkwọ dị otú ahụ, yana. Ọ bụrụ na ịmaghị ma ị ga-etinye akwụkwọ ozi mkpali na ngwa agụmakwụkwọ ma ọ bụ na ọ bụghị, azịza ya na-abụkarị otu, “Ee, ịkwesịrị!” Ọ bụ ohere pụrụ iche iji masị kọmitii nyochaa wee nweta isi ihe ole na ole.
Edemede a na-atụle otu esi ede akwụkwọ mkpali iji nweta akwụkwọ mmụta na kọleji ma ọ bụ mahadum nke nrọ gị. Ma ka anyị malite site ná mmalite!
Nzọụkwụ 1. Họrọ a Format
Akwụkwọ ozi mkpali na-eso usoro nhazi akụkụ atọ ọkọlọtọ, dịka edemede. I kwesịrị ide ahịrị mmeghe ole na ole na paragraf nke mbụ, kọwapụta nzube ya na nke abụọ, ma chịkọta ihe niile na paragraf ikpeazụ. N'aka nke ọzọ, ị nwere ike idepụta n'usoro. Edemede a na-enweghị atụ nwere ike imebi gị. Akwụkwọ ozi dị otú ahụ nwere ike bụrụ ihe na-agwụ ike na mgbagwoju anya nye onye na-agụ ya.
Akwụkwọ ozi mkpali nke paragraf ise na asaa:
Ị nwere ike hazie akwụkwọ ozi ebumnuche gị n'ime paragraf ise ruo asaa. Usoro a kacha dị irè. Ọ na-enye ohere ikwupụta echiche gị n'ụzọ ezi uche dị na ya na nke kwere nghọta. Ọzọ, ịchọrọ otu paragraf maka okwu mmeghe na otu paragraf maka mmechi. Ahụ ahụ kwesịrị ịkọwa ebumnuche ngwa ọ bụla na paragraf dị iche. Buru n'uche oke. Ịkwesịrị itinye echiche gị niile na paragraf ise kacha.
Nzọụkwụ 2. Ụbụrụ
Ị ga-aghọta nke ọma onye ụlọ ọrụ nnabata na-achọ. Na-esote, ị ga-eme nyocha onwe gị iji hụ ma ị dabara na onyinyo nke onye nyocha zuru oke ma ọ bụ na ị kwadoghị. Ọgbakọ ịtụgharị uche nwere ike inye aka. Ị nwere ike ịkpọ enyi ma ọ bụ onye ị tụkwasịrị obi na onye maara maka nkà gị, àgwà onwe gị, mmezu nke agụmakwụkwọ na ọganihu ọkachamara. Maka nnọkọ ahụ, ịnwere ike iji ajụjụ ndị a:
Kedu nkuzi ị chọrọ ịhọrọ?
Kedu ka usoro mmụta a họọrọ ga-esi nyere gị aka na mmejuputa atumatu ogologo oge gị?
Gini mere i ji choro akwukwo?
Kedu ihe na-eme gị onye ndoro-ndoro pụrụ iche?
Kedu ihe ị rụzuru ugbu a?
Kedu ihe ntinye aka ị nyere ugbua?
Kedu ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na akwadoro akwụkwọ anamachọihe gị?
Kedu ka agụmakwụkwọ nwere ike isi nyere gị aka imezu ebumnuche gị?
Kedu ka agụmakwụkwọ ga-esi nyere gị aka itinye aka na ọha mmadụ?
Nzọụkwụ 3: Nke mbụ abụghị nke kacha mma: Na-arụ ọrụ na Drafts
Ọ bụrụ na ị nwere ntakịrị ahụmahụ ide ihe, tụlee na a gaghị etinye akwụkwọ ahụ siri ike nke ị na-ede na mbụ. Ọ bụghị iwu siri ike kama ụkpụrụ nke gosipụtara onwe ya. Inye akwụkwọ anya nke abụọ nwere ike inyere gị aka ịghọta ka ekwesịrị isi gbanwee ya. Ọ bụrụ na ị nwere ohere imeziwanye akwụkwọ ozi gị, jiri naanị ya. Ọ nwere ike ịba uru ka ị were ezumike, otu izu ma ọ bụ abụọ, tupu ịlaghachi na nke a. Oge dị mkpirikpi a na-enye gị ohere ịmeghachi ume gị ma laghachi na iji ume ọhụrụ dee leta mkpali gị. Tụkwasị mmetụta gị na mmuo gị obi. N'ikpeazụ, ide akwụkwọ mkpali bụ ihe niile gbasara nka na mkpali. Ọ ga-ekwe omume na ị nwere ike dee edemede atọ ma ọ bụ karịa tupu ị wepụta mpempe kwesịrị ekwesị. Ọzọ, agaghị etinye akwụkwọ nke mbụ. Otú ahụ ka ọ dị. Kama, ekwesịrị imeziwanye ya.
Kwụpụ 4: Kpoo nguzozi
Ihe ọzọ a na-emekarị bụ ịgbalị itinye ndụ gị niile n'ime edemede dị mkpirikpi. Ị kwesịrị ịghọta nke ọma na ọ bụghị mgbagwoju anya mana ọ gaghị ekwe omume. Ndụ gị dị nnọọ ukwuu karịa otu ibe. Iji zere nchekasị na mgbagwoju anya, gbalịa chọpụta ihe ndị kacha mkpa na akụkọ ndụ gị. Ha nwere ike inyere bọọdụ nnabata aka ịghọta onye ị bụ yana ihe ị nwere ike ime. Akwụkwọ ozi gị kwesịrị ịbụ ezi uche ma doo anya. Nwee ezi obi na nke onwe mana emela mmekọrịta chiri anya. Akwụkwọ ozi gị kwesịrị igosi ụdị mmadụ gị, nka, ọchịchọ gị, na imepụta ihe, yana ikike iche echiche n'èzí igbe, bụrụ ihe okike na nyocha. Chee echiche banyere otu ihe na-agbanwe ndụ wee wulite akụkọ ahụ. Ịtụ nguzozi adịghị mfe. Wepụta oge zuru oke na-eche echiche maka atụmatụ akwụkwọ.
Nzọụkwụ 5. Dee mmechi
Paragraf ikpeazụ nke leta mkpali gị kwesịrị imechi akụkọ ahụ dum. Na mmechi, ị kwesịrị ị mesie isi okwu ma chịkọta ihe mgbaru ọsọ na atụmatụ ọkachamara gị. N'ebe a, ọ ga-adị mma ịse ihe oyiyi na-egbuke egbuke nke ọdịnihu gị. Na-ekwusi ike ọzọ ihe mere ị ga-eji chọọ scholarships, nke ị na-etinye maka ya. Ị nwere ike ịgwa ha ihe gbasara ọrụ nrọ gị. Ịkwesịrị iburu n'uche na mpempe akwụkwọ a nwere ike imeghere gị ọtụtụ ohere mmụta.
Nzọụkwụ 6: Gụọ, gụgharịa, melite; Tinyegharịa
N'ọkwa ikpeazụ, ịkwesịrị ịmegharị akwụkwọ ozi mkpali gị. Ọzọkwa, ị nwere ike ịrịọ ndị enyi ole na ole, ndị ọgbọ gị, ma ọ bụ ndị ọrụ ibe ka ha lelee akwụkwọ ahụ. Nzaghachi ha nwere ike inye aka melite akwụkwọ ahụ nke ọma. Ka ndị mmadụ na-etinyekwu ọnụ, ka ị ga-enwe ohere iji kpochapụ mmejọ niile. Ị nwere ike ma kwesị iji ndị na-enyocha mkpochapụ akpaaka (ihe dị ka ole na ole) mana ị ga-amara na ha enweghị ike ijide mmejọ ọ bụla. Ọzọkwa, ha agaghị enye gị echiche mmadụ. A sị ka e kwuwe, ị na-ede maka ndị mmadụ, ọ bụghị igwe. Gwa ndị na-agụ akwụkwọ ka ha kesaa echiche ha n'ozuzu banyere akwụkwọ ozi gị. Jụọ ma ha kwenyere gị ma ọ bụ na ha ekwetaghị, ma isiokwu na ozi doro anya ma ọ bụ na ha ahụghị clichés ọ bụla ma ọ bụ ọbụna nhụsianya. Jụọ ha gbasara akụkụ kacha esighi ike nke akwụkwọ ahụ.
Atụla egwu nzaghachi na-adịghị mma. Ọ nwere ike ịbụ nke kacha baa uru. N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike ịchọpụta njikọ niile adịghị ike ma melite ha. N'ikpeazụ, jụọ ha ma akwụkwọ ozi ahụ ọ̀ maara nke ọma ma ọ bụ na ọ dịghị. Ọ bụrụ na azịza ya bụ 'Ee,' anyị nwere akụkọ ọjọọ. Ọ pụtara na ị kwụsịrị igosipụta àgwà gị. Enweghị ụjọ! Ọ dịghị ihe na-efunahụ! Ị ka nwere ike melite mkpụrụedemede wee mee ka ọ zuo oke.
Anyị na-atụ anya na mgbe ị gụchara isiokwu a, ị ghọtara otú e si ede akwụkwọ ozi mkpali. Ugbu a, ị nwere ike ijikwa! Jisie ike!
Ọzọ na: Mkpali
Nkwalite Spotify bụ ọla edo ọhụrụ!